Antenimieram-pirenena: Nodimandry i Rakotomalala Lucien, depiote voafidy tao Morombe
mercredi, 08 juillet 2020 10:35
Namoy ny ainy ny talata 7 jolay 2020 i Rakotomalala Lucien, solombavambahoaka IRD voafidy tao amin’ny Distrika Morombe, Faritra Atsimo Andrefana. Nanana areti-mitaiza sohika ity parlemantera ity. Tao amin’ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana no nitsaboana azy. Talohan’ny nifaranan’ny fotoam-pivoriana ara-potoana ny Antenimieram-pirenena izy no efa tsy salama, ary tsy tonga niatrika fivoriana intsony.
Nandroso tolo-pehin-kevitra laharana faha 03/2020/PR miompana amin’ny fananganana ny “Commission d’enquête parlementaire” mikasika ny asan-dahalo any amin’ny Distrika Morombe ny tenany, mba tsy hisian’ny tsimatimanota sy ho fanafoanana ny kolikoly. Nolanian’ireo Solombavambahoaka nandritra ny fivoriana ny 29 jona 2020 io.
Herintaona katroka toy izao, 7 jolay 2019, nandritra ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra na CAN 2019 natao tany Ejipta, no nindaosin’ny fahafatesana tampoka teo ampijerena lalaon'ny Barea tamin'ny fahitalavitra i Randriarimalala Harijaona na Jaona Elite, depiote taloha voafidy teny Atsimondrano.